Sagaal Ciyaartoy Oo Real Madrid Ka Tirsan Oo Waqtiga Kulamada Caalamiga Ah Dagaal Ugu Jira In Ay Zinedine Zidane Qanciyaan. - Gool24.Net
Sagaal Ciyaartoy Oo Real Madrid Ka Tirsan Oo Waqtiga Kulamada Caalamiga Ah Dagaal Ugu Jira In Ay Zinedine Zidane Qanciyaan.
Waxaa jira ilaa sagaal ciyaartoy oo si adag ugu shaqaynaya xarunta tababarka kooxda Real Madrid kuwaas oo doonaya in ay Zinedine Zidane qanciyaan inta lagu jiro kulamada caalamiga ah ee xulalka aduunka.
Zinedine Zidane ayaa inta ugu badan soo adeegsanayay ciyaartoy isku mid ah kulamadii xili ciyaareedkan, waxaana jira xidigo badan oo aan ilaa hadda fursad helin iyo kuwo aan waqti badan ciyaarin.
Zinedine Zidane ayaan fasax ahayn waqtiga kulamada caalamiga ah wuxuuna la shaqaynayaa xidigaha aan qaybta ka ahayn kulamada xulalka aduunka waana waqti ay ciyaartoydii aan fursada helin u adeegsanayaan in ay Zidane qanciyaan.
Sagaal ciyaartoy ayaa helay 12 maalmood oo ay si khaas ah ula shaqaynayaan Zinedine Zidane si ay macalinka kooxdooda u tusaan in ay fursad ka helaan shaxda kooxdiisa Madrid.
Brahim Diaz oo aan wali fursad ka helin Zidane, Isco oo 104 daqiiqo oo kaliya ciyaaray ayaa ka mid ah sagaalka xidig ee doonaya in ay Zidane ku qanciyaan qaab ciyaareedkooda inta lagu jiro waqti caalamiga ah.
Luka Jovic oo 218 daqiiqo oo kaliya ka soo muuqday kooxda uu Zidane ku shaqaynayay ayaa ka mid ah ciyaartooyda dagaalka ugu jirta in ay macalin Zidane qalbigiisa hantaan inkasta oo saxiixan cusubi uu doonayo in uu fursad ka badan inta uu soo helay uu Zidane siiyo.
Odriozola oo 270 daqiiqo ilaa hadda ciyaaray ayaa Zidane ku qancinaya in uu si toos ah difaaca midig ugula tartami karo Dani Carvajal.
Marcelo iyo Mendy ayaa si buuxda uga soo kabsanaya dhaawacyo soo gaadhay waxayna ku tartamayaan booska difaaca bidix iyaga oo Zidane ku qasbaya in uu qaab ciyaareedkooda tababarka uu ku kala doorto.
Da’yarka Vinicius Jr ayaa liiska xulka qarankiisa Brazil ku seegay in aanu kooxda kowaad ee Real Madrid ka ciyaarin waqti ku filan kadib markii uu Zidane ka helay 313 daqiiqo oo kaliya wuxuuna hadda inta lagu jiro kulamada caalamiga ah uu qancinayaa Zidane si uu waqti badan u helo.
Lucas (362 daqiiqo) iyo James Rodriguez oo ciyaaray 321 daqiiqo ayaa ka mid ah ciyaartoyda doonaya in ay Zidane si buuxdau qanciyaan. James ayaa xataa ka gaabsaday in uu xulkiisa Colombia la safro si uu iskugu dayo in uu Zidane ku qanciyo qaab ciyaareedkiisa tababarka.
Iyada oo xidighii muhiimka ahaa ee Real Madrid ay ku maqan yihiin kulamada caalamiga ah ee xulalkooda, waxay xidigaha Zidane la joogaa wadaan qorshihii ay fursad ku heli lahaayeen.